Yakachipa Industrial Double Screw Komposting Turner Machine Yekuvirisa Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Chii chinonzi Double Screw Composting Turner Machine?
Chizvarwa chitsva che Double Screw Komposting Turner Muchina yakavandudzwa yakapetwa kaviri axis inodzosera kutenderera kufamba, saka ine basa rekushandura, kusanganisa uye oxygenation, kugadzirisa iyo yekuvira muyero, kuora nekukurumidza, kudzivirira kuumbwa kwehwehwe, kuchengetedza simba rekushandisa kweoksijeni kuzadza, uye kupfupisa iyo yekuvira nguva. Iko kudzika kwekudzika kwemidziyo iyi kunogona kusvika kusvika 1.7 metres uye iko kutendeuka kunoshanda kunogona kusvika 6-11 metres.
Kushandiswa kwe Double Screw Composting Turner Machine
(1) Double Screw Komposting Turner Muchina Inoshandiswa zvakanyanya mukuvirisa uye kubvisa mvura mashandiro senge manyowa manyowa zvirimwa, mukomboni fetiraiza zvirimwa,
(2) Inonyanya kukodzera kuvirisa zvinhu zvakaderera senge sludge uye marara emaspala (nekuda kweiyo yakaderera manyowa zvemukati, kumwe kudzika kwekuvirisa kunofanira kupihwa kusimudzira iyo yekudziya tembiricha, nokudaro ichideredza nguva yekuvirisa).
(3) Ita kusangana kwakaringana pakati pezvinhu uye oksijeni mumhepo, kuti uite basa rakakosha reaerobic Fermentation.
Chengetedza Pfungwa Dzakakosha dzeKompositi
1. Mutemo wekabhoni-nitrogen ratio (C / N). Iyo yakakodzera C / N yekuora kwezvinhu zvakasikwa neakawandisa ma microorganis angangoita 25: 1.
2. Kudzora kwemvura. Iyo yemvura yemukati me compost mukugadzirwa chaiko inowanzo kudzorwa pa50% -65%.
3. Kompositi yekudzivirira mweya. Oxygen kupa chinhu chakakosha pakubudirira kwemanyowa. Inowanzotendwa kuti oxygen mumurwi inokodzera 8% ~ 18%.
4. Kudzora kwekushisa. Kupisa kwakakosha chinhu chinokanganisa mashandiro emakemikari emakemikari. Iko kuvirisa kwakanyanya tembiricha inowanzo kuve pakati pe50-65 ° C.
5. PH kudzora. PH chinhu chakakosha chinokanganisa kukura kwehutachiona. Yakanakisa PH inofanira kuve 6-9.
6. Kudzora kunhuwa. Parizvino, mamwe majekiseni anoshandiswa kudzora mweya.
Zvakanakira Double Screw Composting Turner Machine
(1) Iyo yekuvirisa paburi iyo inogona kuona mashandiro eimwe muchina ine akawanda maburi inogona kuburitswa zvichiramba kana mumabatch.
(2) Kukwirira kukuru kwekuita, kugadzikana kushanda, kusimba uye kusimba, yunifomu kutendeuka.
(3) Inokodzera kuitisa aerobic inogona kushandiswa pamwe chete nemakamuri ekuvirisa ezuva uye mashifita.
Double Screw Composting Turner Machine Vhidhiyo Ratidziro
Double Screw Composting Turner Machine Model Sarudzo
Hydraulic Pombi mota
Pashure: Wheel Type Composting Turner Muchina
Zvadaro: Vertical Kuvira Tangi